किसान मजदुरका सर्वहारा नेता : 'सहिद सूर्यनाथ रान' | किसान मजदुरका सर्वहारा नेता : 'सहिद सूर्यनाथ रान' |
अजय कुमार बरबरिया (यादव)/
सूर्यनाथ रान– धनुषाको पूर्वी क्षेत्रमा सर्वहारा र किसानको नेताले नामै काफी छ ।
कमरेड सूर्यनाथ राण किसान, मजदुर , सर्वहारा वर्गका पक्षमा बाचुन्जेल सँघर्ष गर्ने एक सच्चा क्रान्तिकारी, निडर र किसान मजदुरका मसिहा थिए । धनुषा जिल्लाको शहिदनगर नगरपालिका वडा नं. ८ डुमरिया चोक स्थित बनाइएको शहिद सूर्यनाथ रान स्मृति स्मारकले जो कोहीलाई पनि सर्वहारा नेता, किसानको मसिहा भनेर झल्झल्ती सम्झन्छन् ।
धनुषाको पूर्वी क्षेत्रका राजनीतिक आस्थाले जो सुकै पार्टीका भएपनि नेतृत्व र नेताको आस्थाले सूर्यनाथ रानको प्रतिष्ठा, मान सम्मान अहिले पनि उत्तिकै छ । जुनसुकै राजनीतिक दलका नेता, नेतृत्व, जनप्रतिनीधि भएपनि गणतन्त्रको लागि, किसानको लागि लडेका एक मात्र दिग्गज नेताको रुपमा सम्मान पाउनु साधारण होइनन् । नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीकाको गढ मानिएको पूर्वी क्षेत्र र सो क्षेत्रमा जस्तोसुकै नेता आएपनि शहिद सूर्यनाथ रानको स्मारकमा फूलमाला चढाउनु स्वभाविक बनेको छ अहिले पनि ।
त्यतिबेलाको सरकारले तराई मधेशका किसानसँग प्रत्यक्ष सदभाव नराखेको खण्डमा पनि उहाँले किसानहरुको एक आस्थाको रुपमा उभिएका थिए । एक विश्वास, एक सोंच र एक शक्तिको रुपमा उभिएको थियो । सूर्यनाथ रानको व्यक्तित्वले अहिले पनि यहाँका आम जनता प्रभावित छ । मनमा ईज्जत, प्रतिष्ठा र सो क्षेत्रलाई सूर्यनाथ रानको क्षेत्रको रुपमा परिचित पनि गराएको छ । उहाँसगै र उहाँकै प्रभावमा राजनीतिमा पाईला टेकेका नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम धनुषा जिल्ला ईन्चार्ज श्रवण कुमार बरबरिया (यादव) ले उहाँको वृतान्त र उहाँको जनताप्रतिको लगाव बारे सुनाउनुभयो । उहाँ कसरी किसानको सर्वहारा नेताको रुपमा चिनिनुभयो भन्ने बारे यसरी भन्नुहुन्छ :
आज मेरा अभिभावक, मेरा गुरु श्रदय सुर्यनाथ काकाको बारेमा चर्चा गरिरहँदा उहाँ संग बिताएका पल उहाँले दिनुभएका उपदेशहरु ताजा भएर आएको छ ।
काका एकदम सरल , सलिन, स्वभावका साधारण पहिरण तल धोती र माथि कमिज लाउन रुचाउँनु हुनुथ्यो । ती सरल स्वभाव , साधारण पहिरण अनुसरण गरेका सुर्यनाथ काकालाई सबैका प्रिय सबैका मसिहा स्थापित गर्ने , शस्त्र उहाँ को क्रान्तिकारी विचार थियो ।
म बाल्यकाल अथार्त सात वर्ष देखि नै सूर्यनाथ काकाको समिप भएर उहाँलाई बुझने स्वभाग्य प्राप्त गरेका छु । सूर्यनाथ काका गरिवका मसिहा हुन भने् कुरा बुवा र गाँउले का मुखबाट सुनेका थिए । सूर्यनाथ काका र मेरो घर एकै ठाउँ भएकाले गाउँमा बैठकहरु हुँदा खानाका व्यवस्थापनको लागि काकाले मलाई बौलाएर भन्नुहुन्थ्यो– “भतिज पाँच सात जना छौं ।” हामी फलानोको घरमा दुई जनाको जिम्मा यसरी खानाको व्यवस्थापन हुनथ्यो । दिनदिनै सूर्यनाथ काकाको नजिक हुन थालेका थिए ।
काकाले मलाई कर्जन्हा , जयनगर, जनकपुर जाँदा आफु सँग लानु हुन्थ्यो । मलाई याद छ, एकदिन केही व्यक्तीहरुलाई भेटन काकालाई जयनगर जानु थियो । मलाई बोलाउनु भयो– “भतिज आज म सँग जानु पर्छ ।” काकासँग जयनगर जाने क्रममा मलाई उहाँले वाटोमा सोध्नुभयो श्रवण तिमि थाकिसके होला , विश्राम गरु –गरु जस्तौ लाग्दै होला तर तिमी भविष्मा क्रान्तीकारी योद्धा बन्नुपर्छ ।
त्यसैले जिवनमा क्रान्तिकारीले कहिले थकाई महसुस गर्नु भएन । बाटोमा दुई जनाले खाने कुरा दिएका थिए । छठको बेला भएकाले ठकुवा र केरा दिएका थिए । म बच्चै थिए त्यसैले खान थाले अलि अगाडि गरएर काका मलाई सम्झाउनु भयो भतिज तिमीलाई भोक लाग्छ भन्ने मलाई भन्ने गर । र कसैले दिएको खानेकुरा त्यतिकै कहिले नखानु । जिवनमा यो कुरा तिमीलाई काम लाग्छ श्रवण, कहि पनि खानेकुरा आवश्यकता जति मात्र खानु । यो कुराले तिमिलाई संङघर्षमा जिवीत राख्न मदत गर्नेछ । “कमरेड सूर्यनाथ दुर्गागामि सोच बोकेका क्रान्तीकारी नेता हुनुहुन्थ्यो ।”
कमरेड सूर्यनाथको चचेरा भाई तेजनारायण यादवले नेपाली सेनामा जानको लागि फर्म भरेका थिए । मलाई नि फर्म भर्नको लागि कर गरेका थिए । एक दिन सूर्यनाथ काका मेरो घर आउनु भएको थियो । मेरो बुबाले सूर्यनाथ काकालाई भनेका थिए । “आपनो विगरले श्रावणके सेहो विगार विही एकरा नेपाली सेनामे भरति करवाह दहि” सूर्यनाथ काकाले हाँस्दै भनेका थिए (मैथिलीमा)– “ यि नेपाली सेना नै, यी लाल सेना बनतो यी नेता बनतो” बुवाले सूर्यनाथ काकालाई – “तिमी विगरिदै गरियो श्रवण लाई पनि विगार छौं , भन्दा मलाई दुख लागेको थियो ।” तर उहाँले हाँस्दै –हाँस्दै वुवालाई जवाफ फर्काउँदा म चकित भएको थिए ।
सूर्यनाथ काका चिया धेरै पिउनु हुन्थ्यो । म १० वर्ष जनयुद्धमा प्रत्यछ रुपमा स्वयम् सहभागी भएका थिए । तर जनयुद्धका कुरा सूर्यनाथ काकाले मलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो – “श्रवण यो देशमा समान्त , जमिन्दार को बिरुद्धमा एक चोटी जनताले ठुलो युद्ध गर्न जरुरि छ । यो जमिन्दार समान्तहरुलाई तह लगाउनु पर्छ । जहिले पनि किसान मजदुर गरिव को लागि लडनु । जमिन्दारहरुले विभिन्न लोभ प्रलोभ मा पारेर फसाउँन खोज छ । तर हाम्रो लडाई किशान मजदुर को पक्षमा बाचुन्जेल लडनुपर्छ ।”
उहाँको बारेमा बुवाहरुबाट पनि सुनेका थिए । सूर्यनाथ राण, किसान आन्दोलनका अगुवा नेता हुनुहुन्थ्यो । सिमराढीको लडाईमा किसानहरुको पक्षबाट कमरेड सूर्यनाथ राणले अगुवाई गरेका थिए । र जमिनदारको पक्षबाट हेमवहादुर मल्लले अगुवाई गरेका थिए । सिमराढी गाँउ पूर्णरुपले कब्जा गरिएका थिए । अन्नका बखारी देखि पशु सम्म कब्जा गरेर ल्याएका थियो । तर कमरेड सूर्यनाथ पक्षकाले भनेका थिए– “विपछीहरुको कब्जा गरिएका समानहरु फिर्ता हुँदैन ।”
तर, कमरेड सूर्यनाथले सिमराढीका जनताहरुलाई जम्मा गरेका किसान आन्दोलन र सिमराढी जितको बारे बताउँदै अनाज र गाई भैँसीहरु फिर्ता गर्न लगाएका थिए । आफ्नो पक्षकालाई सम्झाउँदै भनेका थिए । सिमराढी गाँउका जनताको के दोष तिनीहरु न बुझेर हेमबहादुर को पक्षमा लागेका छन् । हामीलाई आफ्नौ विचार बुझाउन जरुरी छ । यस्ता विभिन्न आन्दोलनहरुको उहाँ अगुवाई गर्नुहुन थियो । मजदुरहरुलाई खेतमा खटाएर जमिन्दार हरुले पश्रामिक (बैन) कम दिन्थ्यो । कतिपयलाई दिदैन पनि थियो । चोराकोयलपुर, मतौना, चिरैया, डरखोरिया, पठेरवा, सिमराढी, किरतपुर आदि गाँउहरुमा मजदुरहरुको लागि बैन आन्दोलन गर्नुभएका थिए । किशान मजदुर का लागि सदैब अग्र मोर्चामा रहेर सङघंर्ष गर्न रुचाउँने सम्भावका कारण उहाँ सबैका प्यारा किसान मजदुरका मसिहा र जमिनदारका कालका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाई सकेका थिए ।
कमरेड सूर्यानाथको समयमा चिकना जमिन्दार रुदले का बिगबिगी थियो । जमिन्दारले जमिन बेचने पैसा समेत असुलने तर रजिष्ट्री कसैको पनि नगर्ने । यसबाट पठेर्वा , वतराही ,वेमरखि,हठिमुनढा,ढोलवाजा,किरतपुर कमला भेगका जनताहरु पिडित थिए । कमरेड सूर्यनाथ यसको विरुद्धमा पनि जमिन्दारको विरुद्ध खरो रुपमा उतरेका थिए ।
किसानहरुका जमिनको रजिष्ट्रेसन जमिन्दारलाई गर्न लगाएका थिए । कमरेड सूर्यनाथले पनि जमिनदार सँग जमिन किनेका थिए । गाँउका नातेदारहरुले कमरेड सूर्यनाथलाई भनेका थिए– “खेतको रजिष्ट्रेसन चाँडो गराउँ, न भए जमिन्दारले तिम्रो खेत बेइमानी गर्नेछ ।” तर, कमरेड सूर्यनाथले हाँस्दै – हाँस्दै भनेका थिए , – “कम्युनिष्टको जमिन कसले किन्छ र कसले बेईमानी गर्न सक्छ ? जसको कारण उहाँको ५ बिगहा भन्दा बढी जमिन जमिन्दारले बेचे ।
किसानको हकहितको लडाईमा प्रत्यक्ष रुपमा अर्ग मोर्चामा रहेर सङघर्ष गरेका विजय प्राप्त गरेका कारण सिमराढी लडाई , बैन हडताल आदि आन्दोलनका माध्यमले कमरेड सूर्यनाथ जनताका मसिहाका रुप स्थापित हुनु स्वभाविक नै थियो ।
कमरेड सूर्यनाथको जनता बिच बढदो लोकप्रियताले विपक्षी हेमवहादुर मल्ल , रुद्धले जमिन्दारहरुको निन्द हराम भइसकेको थियो । सूर्यनाथ काकालाई प्रमुख सत्रु बनाईसकेका थियो । कैयौं पटक कमरेड सूर्यनाथलाई मार्ने योजनाहरु हेमवहादुरको आदेशमा बनाईएका थिए ।कैयौं पटक उहाँ माथि आक्रमण भयो ।
मलाई याद छ – चोराकोयलपुरका हेमवहादुर मल्लका केही दलालहरुले सूर्यनाथलाई आफ्नो घरमा ठुलो खाल्डो खनेर र खाल्डोमा पूर्णे योजना बनाएका थिए । सूर्यनाथलाई योजनाका बारेमा केही जानकारी थिएन । चोराकोयलपुरका हेमवहादुर इसारामा चल्लनेहरुको निमन्त्रणामा कमरेड सूर्यनाथ उनीहरुले बोलाएका घरमा पुगेका थिए । यो योजनाको बारे चोराकोयलपुरका कम्युनिष्टका नेता राम खेलावनले भनक पाए, राम खेलावन काका सिधै सूर्यानाथ भएको घरमा पुगे सूर्यनाथ खानामा बसेका थिए । राम खेलाउन काकाले कमरेड सूर्यनाथको हात समाउदै खानाबाट उठाएर लिएर भागे ।
“सूर्यनाथ माथि बारम्बार हेमवहादुर, जमिन्दारहरुले हमला गराउँदै थियो ।सूर्यनाथको ज्यानको खतरा छ । त्यसैले सूर्यनाथलाई बचाउन दश जनाको मोर्चा गठन गरियो । एकचोटीको घटना हो हेमवहादुरको सूर्यनाथलाई मार्ने विभिन्ना योजनाहरु विफल भएपछि झिझाका डाकुहरुलाई बोलाएर आक्रमण गर्न पठाएका थिए ।”
तर, सूर्यनाथ लाई बचाउन बनाएका मोर्चा जसमा मेरा बुबा पनि हुनुहुनथियो । ति मोर्चाहरुले झिझाका डाकुहरुलाई पराजित गरेर भगाएका थिए । यसरी कयौ चोटी सूर्यनाथ माथि योजनाबध आक्रमणहरु गरिएको थियो । तर सूर्यनाथ किसान मजदुरका मसिहा भईसकेका थिए किसान मजदुरहरु सुर्यनाथ लाई जोगाउनु आफनो कर्तव्य ठानेको थियो ।
कमलाको भेगमा कमरेड सूर्यनाथ जस्ता क्रान्तिकारी नेताको उदय हुनु एउटा गर्वको विषय हो । कम्युनिष्ट पार्टीको १३ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । त्यस मध्ये सूर्यनाथ पनि एक केन्द्रीय सदस्य थिए । एउटा किसान परिवारमा जन्मेका कमरेड सूर्यनाथ राणले पार्टीका आधा केन्द्रीय सदस्य र पाटी को खर्च व्यवस्थापन गर्थियो । एउटा क्रान्तिकारी काईडरमा हुने सम्पूर्ण गुणहरु श्रदेय कमरेड सूर्यनाथ राणमा थियो ।
मलाई अहिले पनि सूर्यनाथ काकाले सहयोग गरेका मान्छेहरु भेटदा उहाँको बारेमा कुरा गर्दा भाबुक हुन्छु । कसैको छोरीको विवाह कपडा , पैसाको कारण रोकिएको भए जयनगर दानिबाबुको दुकानमा गएर , मैले दिएको प्रचा दिनु विवाहको लागि कपडा दिने छ भनेर कमरेड सूर्यनाथले पठाउने गर्नुहुन्थ्यो । कुनै वृद्ध जाडोको मौसममा ओढनाको कारण कापदै छ भन्ने आफुले ओढेका ओढना समेत दिन्थे ।
“उहाँको उदार बादि विचारले उहाँलाई अरु लिडर भन्दा भिन्न बनाएको थिए । उहाँ साचिनै सर्वहारा वर्गका नेता थिए । म १० वर्ष जनयुद्धको सुरुवात देखी त्यस्ता लिडरहरु खोज्दै छु । तर कमरेड सूर्यनाथ काका जस्तो सर्वहारा वर्ग , किसान मजदुरका लागि आफनो स्वार्थको पुन रुपमा तिलाञ्जली दिसकेका एउटा पनि लिडर (नेता) पाईएका छैन सबै सर्वहारा वर्गका नेता बन्ने ढोङ्ग मात्र गर्छ ।”
कामरेड प्रचण्ड त्यो बेला सायद स्कूलको मास्टर हुनुहुन्थ्यो होला । म सूर्यनाथ काका संग जयनगर जाँदा एक हप्ता उँहा सँगै बाहिर बसेका थिए । त्यो बेला उँहाले मलाई सम्झाउदा भन्नुं हुनथ्यो । आज पनि ऊँहाको उपदेश मलाई ताजा भएर आएको छ । हामी जयनगरको छेउ बेला भन्ने ठाउँमा थियौं । म र सूर्यनाथ काका त्यहीका एक जना असामीको घरको बास बसेको थियो । त्यो रात भावुक भएर सूर्यनाथ काकाले मलाई भन्नुभयो– “श्रवण ध्यानले सुन, नेपालमा एउटा ठूलो यूद्धको आवश्यकता छ । एउटा ठूलो यूद्ध हुन्छ र त्यो यूद्धको लागी लाल सेनाको आवश्यकता पर्छ । लाल सेनाले यो देशको वुर्जुवा सतालाई धारासाही पार्छ । अनि जनताको सत्ता स्थापित हुन्छ ।”
प्रचण्ड कमरेड भन्दा पहिला जनयुद्धको परिकल्पना गर्ने कमरेड सूर्यनाथ रान हुनुहुन्थ्यो । मलाई सूर्यनाथ काकाले भन्नु भएको थियो । श्रवण तिमी लाल सेना बन्नु । म नहुन पनि सक्छु , दलालहरुले मलाई मार्न सक्छ । त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नु , पानीले नुहायो भने गन्दगी मैला फोहर सफा हुन्छ । तर, पसिना रगतले नुहायो भने इतिहँस बन्छ । त्यसैले पसिना र रगत बगाउनेमा पछि कहिलै नहटनु कम्युनिष्ट जिवन भरि सङ्गघर्षमा हुन्छ । धेरै पटक पराजयको स्वाद चाख्नु पर्छ । तर कम्यूनिष्ट कहिले पनि थाकदैन र बिचलन हुँदैन । म कुनै माक्र्सवादी स्कूलमा पढेको होइन तर कमरेड सूर्यनाथको उपदेशले मलाई दश वर्षे जनयुद्धमा होमिन प्रेरित गरेको थियो । सायद, सूर्यनाथको गाउँमा मेरो घर नभएको भए कमरेड सूर्यनाथको नजिक नभएको भए, म आज किसान मात्र हुन्थे वा नेपाली सेनामा हुन्थे ।
सूर्यनाथ काकाकै कारण म १० वर्षको जनयुद्ध जनताको अधिकारको लडाईमा कम्युनिष्ट पार्टिमा लागे । सूर्यनाथ कमरेडले दिएको उपदेशलाई म जनयुद्धमा समेत प्रयोग गरेको छु । जनयुद्धको सुरुवात भन्दा अगाडि बरमझियाको लडाइमा हामी प्राजय भयो हामी भााग्नु पर्ने अवस्था आएको थियो रामवृक्ष मास्टर साहेब पुरा थाकिसक्नु भएको थियो । उहाँले मलाई भन्नु भयो श्रावण म मरे मर्छु, तर अब म भाग्न सकिदैन । छोडेर जाउ तिमिहरु । त्यो बेला म कमरेड सूर्यनाथ काकाले भनेका सम्झै , उहाँले भन्नु भएका थिए– कम्युनिष्ट कहिलै थाक्दैन थाक्यो, भने शत्रुले सखाप पार्छ । रामवृक्ष मास्टरलाई हामीले बोेकेर कमला नदी त¥यो । मेरो अभिभाव मेरा गुरु हुनुहुन्थ्यो श्रदय काका सूर्यनाथ ।
उहाँले भन्नुहुन्थ्यो,–कम्युनिष्टलाई कसैले पाराजय गर्न सक्दैन । कम्युनिष्टलाई कम्युनिष्ट भित्रमा रहेका शत्रुले मात्र प्राजित गर्न सक्छ । उहाँको यो कुरालाई मैले उहाँको मृत्युपछि सम्झेको थिए । म र उहाँको जेठो छोरा अशेश्वर सूर्यनाथ काकाले हामीलाई उहाँको नातेदारको घर सिरहा जिल्लाको ठेङगही पठाउनु भाको थियो । निर्दानाका किशुन मण्डल , चिकनाका खगेशर साह , बैल्हाका सानेहरु मिलेर कमरेड सूर्यनाथ राण लाई योजना वद्ध तरिकाले सिरहाको निर्दना गाउँमा समात्न लगाएका थिए । म र अशेश्वर ठेङ्गही बाट फर्किदै थिए । बाटो मै सारश्रको नजिक कमला खोलामा मतौनाको रामेश्वर मास्टर साहेवले सूर्यनाथ राण लाई समातियो भनेर हामीलाई भन्यो । हामी त्यही बाट सिरहा फर्केका थियो । तर विडम्बना हामीलाई कमरेड सूर्यनाथ रानसँग भेटन दिएको थिएन । हामी फर्कियौं ।
“उहाँको गिरफतारी पश्चात केहि महिना पछि उहाँलाई सिरहाको जेलबाट लगेर दिक्तेल जेल सरुवाको वाहानामा भडेटारको जङ्गलमा लगेर निर्ममता पूर्वक कमरेड सुर्यनाथ राणको हत्या गरियो ।”
कम्युनिष्टका भविष्य नेपाली क्रान्तिको कम्युनिष्ट धरोहर कमरेड सुर्यनाथ राणको यसरी निर्ममता पुर्वक पञ्चाियती दलालहरुले हत्या ग¥यो । म जनयुद्धमा लाग्दा मोरङ्गको भयडेटार जङ्गलमा पुगे पाँच दिन सम्म उहाँको शरिरको हडी पनि फेला पार्ने उदेश्यले गएका थिए । तर हामीले त्यहा केही पनि पाएन । अनि त्यहाका त्यस बेलाका गा.वि.स अध्यक्ष (प्रधानलाई) कमरेड सुर्यनाथ राणको बारेमा सोध्दा उहाँले भन्नुक भयो २०४२ असोज महिनाको समयमा रिमझिम बर्षाको बेला एक जनालाई प्रहरीले ल्याएर हाम्रो जङ्गलमा मार्यो र लास प्रहरीहरुले लिएर गएको थियो ।
उहाँको हत्याराहरुलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर म हाम्रो पार्टीको त्यस बेलाको बैठकमा समेत कुरा उठाएका थिए । बिडम्वना कमरेड सुर्यनाथले जुन उदेश्य्का साथ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाग्नु भएको थियो । ती उदेश्यहरु केहि पुरा भए र केहि अन्योलमा परेको छ । व्यवस्था त फेरिए तर प्रवृति उस्ताको उस्तै कायम छ कमरेड सूर्यनाथ राणको खाँचो महसुस भईरहेको छ । अहिलेका लिडरहरु स्वार्थी भएका छन् । सूर्यनाथ जस्तो निडर विनास्वार्थ कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लाग्ने नेता मैले जनयुद्धमा पनि देखिन ।
सुर्यनाथ एउटा नेपालको शहिद मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय शहिद हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँको शालीक बनाउनका लागि कयौं शिर्ष नेताहरुलाई गुहारे पार्टी सरकारमा जादाँ पनि कसैकोे ध्यान सूर्यनाथको शालीक बनाउनुपर्छ भन्नेमा गएन ।
विं. सं. २०७० को चुनावमा म पार्टीबाट बागी भएर चुनाव लडेका थिए । त्यो बेला मलाई कमरेड सूर्यनाथ राणको सबै भन्दा बढी उहाँको उपदेशहरु सम्झेका थिए । उहाँले दिएको उपदेशले मलाई पार्टीको गलत निर्णय विरुद लडने उर्जा प्रदान भएको थियो । त्यो चुनावपछि म पार्टीबाट वाहिर जनताको माझमा बसेको थिए । मैले पार्टीको लिडरहरुले नगरे पनि आफनै लगानिमा र जनताहरुको सहयोगमा कमरेड सूर्यनाथ राणको मेटलको शालीक शहिदनगरपालिकाको डुमरियामा निर्माण गरेको छु । कमरेड सूर्यनाथ राणको नाममा शहिद सूर्यनाथ राण मेमोरियल होस्पिटल निर्माण भइसकेको छ र उदघाटनको तरखरमा छ ।
कमरेड सूर्यनाथको नाममा मैले कालो पत्रे सडकको नामाकरण गराएको छु । पार्टीको माथिल्लो नेता र पार्टीले कमरेड सूर्यनाथ रानलाई व्यवस्था गरेको छ । कम्युनिष्टका धरोहर कमरेड सुर्यनाथ रान जस्ता धरोहरलाई पार्टीले बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । शहिदनगरपालिकामा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ मैले शहिदनगरपालिकाका प्रमुख र प्रतिनिद्यिहरु संग छलफल गरेर शहिद सुर्यनाथ राणको स्मृतिमा नगरपालिका स्कुलहरुमा सर्वजानिक विदा गरेर उहाँको नाममा विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरिएको छ ।
विद्यार्थिहरुलाई कमरेड सूर्यनाथ नामले छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको छ । यसका साथ साथै शहिदनगरपालिकाको वडा नं. ५ पछेर्वामा शहिद सूर्यनाथ राण प्रदेश स्तरिय फुटबल स्यसटेडियम निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । कमरेड सूर्यनाथ राण यादव कम्युनिष्टका धरोहर हुन । उहाँको भौतिक शरिर हामीसँग नभएपनि उहाँको विचार उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति दिएको योग्दानले कमरेड सूर्यनाथ राणलाई अमर बनाएको छ । कमरेड सूर्यनाथ राण मेरा श्रदय गुरु मेरा अभिभावकलाई हार्दिक श्रदाञ्जाली व्यक्त गर्दछु । कमरेड सूर्यनाथ राण अमर रहने छ । कमरेड सूर्यनाथ राण लाल सलाम ।।